Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Courtlọ ikpe Spanish jụrụ ikike ịgba egwu abalị maka COVID
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Courtlọ ikpe Spanish jụrụ ikike nkpuchi klọb abalị
Ụlọ ikpe dị elu nke Andalusia chere na ọ dị mkpa ka paspọtụ ahụike gaa ebe a na -eme ndụ abalị ka ọ bụrụ ịkpa oke na imebi ikike nzuzo ụmụ amaala.
Mee atụmatụ ime 'paspọtụ COVID-19' ịga leta ụlọ oriri abalị nke ụlọ ikpe gbagburu.
A mara ọkwa atụmatụ ọjọọ a na Mọnde.
Atụmatụ a ga -achọ ka EU Digital COVID Certificate, ule PCR na -adịghị mma, ma ọ bụ nnwale mgbochi mmadụ iji gaa ebe obibi abalị ọ bụla na Andalusia.
Courtlọ ikpe dị elu nke Andalusia (TSJA) jụrụ atụmatụ arụmụka nke chọrọ ime ka paspọtụ COVID-19 bụrụ iwu ịga ebe egwuregwu abalị niile.
Ụlọikpe kacha elu na mpaghara ndịda ụsọ oké osimiri Spain kpebiri na ọ bụ megide gọọmentị a Andalusia na mbido izu a. Ime ka paspọtụ ahụike dị mkpa ka ị gaa ebe a na -ebi ndụ abalị ka e chere na ọ bụ ịkpa oke na imebi ikike nzuzo ụmụ amaala.
Onye isi ala gọọmentị mpaghara, Juanma Moreno kwupụtara atụmatụ ọjọọ a na Mọnde. Dabere na Moreno, EU Digital COVID Certificate, ule PCR na -adịghị mma, ma ọ bụ nnwale mgbochi mmadụ ga -achọ ịga ebe obibi abalị ọ bụla na Andalusia.
Ọ bụ ezie na atụ anya na a ga -emejupụta ihe a na Tọzdee, a kwụsịrị ya otu ụbọchị mgbe ọkwa mbụ ahụ gasịrị. Edebere ndokwa ahụ maka nyocha TSJA, iji nweta “oke nchekwa iwu” tupu emebe iwu, ka Elias Bendodo, onye enyemaka onye isi ala kwuru. Mkpebi ikpe ụlọikpe a pụtara na ọ gaghị adị irè ma ọlị.
N'ime ọrịa na-efe efe, Spain edebanyela aha ikpe nde 4.57 nke Covid-19 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwụ 82,000 dị ka Fraịde. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ọrịa ahụ na -ada ada ka obodo ahụ sirila gafere ọnụ ọgụgụ kacha njọ nke Delta na -efe efe.
N’ọnwa gara aga, Courtlọikpe Iwu Iwu nke Spain kpebiri na iwu mkpọchi mkpọchi - nke gọọmentị etiti nyere n’oge ebili mmiri mbụ na 2020 - bụkwa ihe iwu na -akwadoghị.